Mampahafantatra ny torolàlana momba ny varotra miafina vaovao momba ny marketing ao amin'ny LinkedIn
Mafana noho ny mafana: Mampahafantatra ny Recipe Sauce miafina vaovao ho an'ny marketing ao amin'ny LinkedIn
Sabotsy, Martsa 17, 2018 Alahady, Martsa 18, 2018 Douglas Karr
Herintaona lasa izay, LinkedIn nizara ny fomba fahandro manokana an-trano. Rehefa navotsotra izy ireo Sauce miafina: Ahoana no ampiasan'ny LinkedIn ny LinkedIn amin'ny marketing, dia navoakan'izy ireo ampahibemaso ny paikady sy ny toro-hevitra rehetra ampiasain'ny ekipa LinkedIn Marketing Solutions rehefa manatanteraka fampielezan-kevitra amin'ny sehatr'izy ireo manokana.
Ankehitriny, averin'izy ireo ny saosy miafina ary ampiakarin'izy ireo ny hafanana. Tavoahangy mitovy. Tsiro bebe kokoa.
Ny fahaizana mandefitra zava-manitra avo lenta dia miaraka amin'ny fampiharana sy famerimberenana. Rehefa ela, lasa voafehy ny lelanao amin'ny fikirakirana sakafo mafana. Tampoka teo dia tsy manome ny kapoka taloha intsony io dipoavatra jalapeno io izay manome tsemboka tsara. Amin'izay fotoana izay dia mila miakatra ny Mizana scoville hahazo ny fanamboarana anao.
Amin'io toe-tsaina io ihany dia nanamboatra endrika sy mason-tsivana ho an'ny azy ireo izy ireo Saosy miafina ho an'ny tsiro matanjaka kokoa aza. Ao amin'ny torolàlana nohavaozina, dia hahita fanavaozam-baovao izay taratry ny zavatra nianarany rehetra hatramin'ny famoahana ilay torolalana tany am-piandohana tamin'ny fiandohan'ny taona 2017 ianao.
Anisan'ireo fanampiana matsiro amin'ity concoction mafana be ity:
ny fitsapana farany A / B farany ary valiny tena izy amin'ny fampiasana atiny Sponsored LinkedIn, InMail, Dyanmic Ads, ary Form Gen Lead
Fresh ohatra maneho ny fomba fanao farany tsara indrindra amin'ny hetsika
Tetika novolavolainay ampitomboina ny fitaovana vao naseho farany toy ny LinkedIn Matched Audiens sy ny LinkedIn Insight Tag
Fomba mandroso amin'ny famokarana sy ny fampisehoana stellar fampielezana ROI
Ny ekipa LinkedIn dia manadio tsy tapaka ny fomba marketing LinkedIn azy manokana rehefa nahazo fahatakarana tsara kokoa izy ireo momba ny zavatra nanakoako tamin'ny mpihaino matihanina ary nitondra vokatra tsara kokoa. Ity torolàlana ity dia tsy prescriptive fa kosa tokony hanome anao hevitra momba ny fitsapana afaka mihazakazaka hahitanao izay maneno amin'ny mpihaino anao.
Ireo tombontsoa ara-barotra LinkedIn dia misy:
Votoatin'ny Sponsored LinkedIn - Content Contenu dia fomba mahery vaika hanatratra sy hananganana fifandraisana maharitra amin'ireo olona matihanina izay manan-danja amin'ny orinasanao. Araraoty tsara ny fampielezan-kevitrao amin'ireto torohevitra ireto amin'ny famoronana doka mahomby, fampiasana fitaovana maimaimpoana, fitsapana ary fanatsarana.
LinkedIn InMail Sponsored - Sponsored InMail mitarika valiny matanjaka kokoa noho ny marketing mailaka nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra manokana ho an'ireo mpikambana LinkedIn mavitrika ao anaty tontolon'ny matihanina. Ianaro ny fomba hitrandrahana ny tanjak'ity endrika doka tokana ity
Doka Dynamic LinkedIn - Doka dinamika ampiasao ny angona mombamomba ny LinkedIn, toy ny anaram-bondrona, hanaingoana manokana ny doka mba hahafahanao mandefa fampielezan-kevitra haingana.
Ity torolàlana nohavaozina ity dia hampita anao amin'ireo torohevitra sy tetika ao anatiny ilainao hampiakatra ny hafanana amin'ny fampielezan-kevitra LinkedIn anao ary handoro ny tanjon'ny varotrao amin'ny taona 2018.
Sintomy ny tari-dalan'ny insider manokana an'i LinkedIn ary fantaro
Download Ny saosy miafina: Ahoana ny fomba ahitan'ny LinkedIn ny hafanana amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing ary andao isika handrahoana sakafo miaraka amin'ireo fampielezan-kevitra mahomby indrindra nataonao.
Ampidino ny saosy miafina
Tags: ab testingLinkedInlinkin ctrdoka dinika mifandraylinkin infographicmarketing marketingLinkedInVotoatin'ny Sponsored LinkedInMailaka tohanan'ny LinkedInsaosy miafina
Antony 7 hanadio ny lisitry ny mailakao sy ny fomba fanadiovana ireo mpandray anjara